Mogadishu Journal » Golaha shacabka oo maanta ka doodaya heshiiska dekedda Berbera
Mjournal :-Xubnaha golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo 10-kii bishaan Maarso Kalfadhigooda seddaxaad uu furay madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa maanta yeelanayo kulanka ugu horeeyo Kalfadhigaan.
Sida qaar ka mida Xildhibaanada iyo Guddiga warfaafinta ay idaacadda Kulmiye u sheegeen.
Waxaana heshiiskaani uu yahay mid Xukuumadda Soomaaliya ay sharci darro Ku tilmamtay.
iyadoo madaxda shirkadda DP World ay sheegeen in Soomaaliland ay tahay dal Soomaaliya inteeda kale ka madax banaan hadalkaas oo Dowladda Federaalka Soomaaliya ka careysiiyay islamarkaana dacwad ka dhan ah imaaraadka ay ugudbisay Jaamacadda carabta oo Soomaaliya iyo imaaraadka ay ka wada tirsan yihiin.
Arrintaasi Ku saabsan heshiiska dekadda Berbera ayaa hakad gelisay Wadahadaladii Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland waxaana uu u muuqdaa mid wax kala fogeynayo.